Veruzhinji Vokurudzirwa Kuti Varemekedze Kodzero Dzemadzimai
Muzvare Sally Dura vesangano reWomen's Coalition Of Zimbabwe
Masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana vanoti vachabatana nehurumende neChitatu mukucherechedza zuva remadzimai iro riri kucherechedzwa pasi rose.
Dingidira reUnited Nations regore rino rinoti, “Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030.” Dingindira ririkushandiswa zvenepasi rose kusanganisira Zimbabwe nderekuti Be Bold For Change.
Izvi zvinotsinhira zvirongwa zveUnited Nations zvekuti pange pane kuyenzaniswa kwemikana kwevanhukadzi nevanhurume pachasvika gore ra 2030.
Muzinda weAmerica muZimbabwe nhasi wakokera chirongwa chekucherechedza mabasa arikuitwa nevanhu pamwe nemasangano anoshanda mukuchengetedza kodzero dzemadzimai.
"Sangano redu richange rinezvirongwa zvekucherechedza mabasa arikuitwa nemadzimai nemusi weChishanu. Tichange tinevanyarikani vakawanda uye tirikutarisira gurukota rezvemadzimai pachiitiko ichi," Muzvare Chifamba vaudza Studio7.
Hurukuro naMuzvare Ekenia Chifamba